उपत्यकामा बढ्यो कोरोना सङ्क्रमण - Bishwaghatana
उपत्यकामा बढ्यो कोरोना सङ्क्रमण
९ भदौ २०७७ काठमाडौँ : बन्दाबन्दी खुुलेपछि देशव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सरोकार निकाय र नागरिक तहमा उच्च सतर्कता आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले यही अवस्थामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए समुदायमा फैलने र उपचारमा समेत कठिन हुनेछ भन्नुुभयो ।
उहाँले उपत्यकासहित नेपालमा भने ७४३ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा १० हजार २४३ जनाको पीसीआर परीक्षणका क्रममा ७४३ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पोजेटिभ देखिएको हो । तीमध्ये २४६ महिला र ४९७ पुरुष छन् ।
नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३२ हजार ६७८ पुगेको छ । प्रवक्ता गौतमले देशभर ११ हजार २७५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी होम क्वारेन्टाइनमा चार हजार ५६१ जना छन् । विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा नौ हजार १५४ जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् ।
प्रवक्ता डा. गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप आठ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा ४८ वर्षीया एक महिलासहित आठको मृत्यु भएको बताउनुभयो ।
यस्तै सुनसरीका ६७ वर्षीय पुरुष, मोरङका ६५ वर्षीय पुरुष, पर्साकी ७१ वर्षीया महिला र रुपन्देहीमा ६७ वर्षीया महिला र ३८, ५३, ५४ वर्षीय पुरुष गरी आठ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो । योसहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १५७ पुगेको छ ।
← निषेधाज्ञा अवधि थप गर्ने तयारी
काठमाडौंका यी ठाउँमा आज दिनभरी हुनेछैन बिजुली →